Hebei Gain သည်အနက်ရောင်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်ချောချောများတွင်ချောမွေ့လွယ်ကူသောသံတပ်ဆင်နိုင်သောအရွယ်အစားများကိုအကျယ်ပြန့်ပေးသည်။ ပစ္စည်းတိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ထုတ်လုပ်ပြီးစမ်းသပ်သည်။ Class 150 ပုံရနိုင်သောသံ fittings အားလုံးသည် ASME B16.3 နှင့် union များသည် ASME B16.39 နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အားလုံးတံတောင်ဆစ်များနှင့် tees 3/8″ (10 DN) နှင့်ပိုကြီးသောအရာများသည် 100% ဓာတ်ငွေ့အနည်းဆုံး PSI 100 မှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြသည်။ (၆.၉ ဘား)
SZ reducer coupling သည် National 150 Pipe Taper (NPT) Threads တပ်ဆင်ထားသောအမျိုးအစား ၁၅၀ ပုံသွင်းနိုင်သောသံပိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအထွေထွေပိုက်နှစ်ခုကိုတူညီသောလမ်းကြောင်းသို့သွားသည်။ ဖြောင့်ချည်မျှင်များထက်ပိုမိုတင်းကျပ်သောတံဆိပ်များကိုဖန်တီးရန် NPT ချည်နှောင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဆန့်နိုင်မှုမြင့်မားပြီးသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရေ၊ လေနှင့်ရေနွေးငွေ့များတွင်သံချေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်အာမခံချက်အတွက်ဤအတန်းအစား ၁၅၀ သည် ASTM A-197၊ ASME B 1.20.1 နှင့် ASME B 16.3 နှင့်ကိုက်ညီသည်။ Class သည်သည်းခံမှု၊ ဆောက်လုပ်မှု၊ အတိုင်းအတာနှင့်နံရံအထူနှင့်သက်ဆိုင်သောစံဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်သောဖိအားကိုတိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပိုက်တပ်ဆင်မှုဆိုသည်မှာအမျိုးမျိုးသောစက်ရုံများတွင်စီးဆင်းမှုကိုဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဝယ်ယူသောအခါလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားနှင့်လိုအပ်သောကြာရှည်ခံမှုတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ Fittings များကိုပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံ၊ အရွယ်အစားနှင့်အချိန်ဇယား (ပိုက်နံရံအထူ) တွင် threaded or unthreaded ရနိုင်သည်။
အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောပိုက် ၂ ခုအားတူညီသော ဦး တည်ရာသို့ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Reducer coupling
ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအထီးချည်ထားသောပိုက်နှစ်ခုဆက်သွယ်မှုများအတွက်နှစ် ဦး စလုံးကြီးစွန်းတွင်အမျိုးသမီး National Pipe Taper (NPT) ချည်
National Pipe Taper (NPT) ချည်မျှင်များသည်ဖြောင့်ချည်မျှင်များထက်ပိုမိုတင်းကျပ်သောတံဆိပ်များကိုဖန်တီးသည်
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: အနက်ရောင်နှလုံးပုံသွင်းသံကို ISO5922 ANSI / ASME / A197 DIN1692 အရသိရသည်
စံ: British Standard American Standard DIN စံ
အရွယ်အစား: 1/49 "- 6" ISO49, ANSI / ASME B16.3, DIN2950 နှုန်းအဖြစ်
ချည် ISO7 / 1 ANSI / ASME B1.20.1 DIN2999
ဆန့်နိုင်အား: kg33kg / mm2
စမ်းသပ်မှုဖိအား 2.5MPA (25KG / CM2)
အလုပ်ဖိအား 1.6MPA (16KG / CM2)
ပုံစံ ဇီးကွက်။ ပုတီးစေ့ ရိုးရိုး
မျက်နှာပြင် ပူ dipped galvanized ။ အနက်ရောင်
စံပြ တံတောင်ဆစ်၊ Tee၊ Socket, Nipples, Union, Bushing, Plug, Caps, Bends, Cross, Round Flange, တံတောင်ဆစ်လျှော့ချခြင်း, Socket ကိုလျှော့ချခြင်း, Tee လျှော့ချခြင်း, နို့သီးခေါင်းလျှော့ချခြင်း, Crossover စသည်တို့
ဆက်သွယ်မှု ချည် (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း)
လျှောက်လွှာ ပိုက်၊ ရေ၊ လေ၊ ရေ၊
အသိအမှတ်ပြု ISO9001, CIQ, ITS, SGS, BV, CCIC ။
ထုပ်ပိုး: ပို့ဆောင်ပုံး (လိုအပ်ပါက + Pallets)၊ နှစ်ဆအိတ်များ။
ပစ္စည်းပို့မည့်အချိန်: ငွေသွင်းပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်း။
MALLEABLE Iron Pipe FETTINGS အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဓာတုပစ္စည်း (C% 2.4-2.9), (Si% 1.4-1.9), (Mn% 0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%)
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု ဆန့အစွမ်းသတ္တိ >> = 350mpa, elongation> = 10%, မာကျော <= 150HB
အရွယ်အစား 1/8″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 11/4″, 11/2″, 2″, 21/2″, 3″, 4″, 5″, ၆″ ။
black ပုံမှန်အနက်ရောင် / အနက်ရောင်တောက်ပသည်
မော်ဒယ် တံတောင်ဆစ်, Tees, လက်ဝါးကပ်တိုင်, ကွေး, သမဂ္ဂများ, Bushings
ဘေးထွက် Y ကို Brach, ခြေစွပ်, နို့သီးခ, Hexagon / Round
Caps, Plug, Locknuts, Flange, Side Outlet Tees
3. ကာဗွန်သံမဏိတင်းပါး - ဂဟေ fittings ၄
7. PTFE .thread တံဆိပျတိပ်ခွေ ၈
၁၁ ၁၂ ။
ပုံစံ တူညီ, လျှော့ချ
အထုပ် ၁ ။